Dhaqaale dheeri ah - daryeel hooseeya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhaqaale dheeri ah - daryeel hooseeya
Dhakhaatiir tiradaa le'eg weli nama soo marin
La daabacay tisdag 3 februari 2015 kl 10.21
Isbitaallada waaweyn ee magaalada Stickholm ayaan laga helin dar-yeel caafimaad ee u dhigama tirada kor u kacdey ee adeegeyaasha caafimaad, kolka loo barbar-dhigo sannadihii ka horeeyey. Middaasina oo ay ku caddaatay war-bixin ay amuurtaa ka soo saartay hayadda hoggaanka dar-yeelka caafimaad ee gobolka Stockholm.
- War-bixintan ayaa caddeeynaysa in aaney dalka horay u soo marin tiro sidaa u badan ee dhakhaatiir iyo kalkaaliyeyaal caafimaad oo ka howl-gala laamaha caafimaadka degdegga ee isbitaallada, halka dhanka kale aaney si aad ah kor ugu kicin howlaha dar-yeelka caafimaad oo ey helaan dadyoowga u baahan, sida ay sheegtay Anna Starbrink oo xisbiga Folkpartiet u metesha laanta caafimaadka ee gobolka Stockholm.
Hayadda Landstinget oo baaritaan ku sameeysay goobaha caafimaadka degdegga ee isbitaallada kala ah: Isbitalka jaamicadda ee Karolinska, södersjukhuset, Södertälje sjukhus iyo Danderyds sjukhus - ayaa ku ogaatay iney kor u kaceen intii u dhxeeysay sannadihii 2013-2014 tirada shaqaalaha, kor u kaceen mushaarrooyinka ey qaataan, hase yeeshee uu wax soo saarku ka dib dhacay. Isbitaallada qaarkood ayaan ka soo bixin hoowlihii loo igmaday, halka qaarkood uu istaagey kor u kaca wax-qabadkoodu.
Intaa waxaa dheer sida war-bixinta ku cad in howlaha qaarkood ee dar-yeelka caafimaad ey ku baxaan dhaqaale laba jibbaar u dhigma midkii loogu talo-galey. Miisaaniyadda ku baxda dar-yeelka caafimaad ayaa kor u sii kacaya, xitaa goobaha dar-yeelka caafimaad ee mulkida loo leeyahey oo sannadihii ugu dambeeyey ey bukaan-socod-badani u wareegeyeen goobahaa.
Maxaa haddaba lagu macneeyn karaa ammuurtaa?
Middaa ayaa la oran karaa iney ugu wacan tahay dardar-darrida howlaha goobaha caafimaad iyo sidoo kale iyada oo wakhti iyo kharash badan la geliyo howlo ka bax-san dar-yeelka caafimaad, isla-markaana aan tirada iyo kor u kacdey ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha caafimaad loo isticmaalin habkii ugu wanaag-sanaa, sida ay sheegtay Anna Starbrink.
Dhanka kale ururka shaqaalaha ee saraakiisha dar-yeelka caafimaad ayaa isaguna caqabadan arka, hase yeeshee ay Eva Nowak, ahna madaxa laanta ururka shaqaalaha dar-yeelka caafimaad ee Stockholm aamin-san tahay in loo baahan yahay is-bedello guud ee lagu sameeyo howlaha dar-yeelka caafimaad ee isbitaallada, halkaasina oo ay sheegtay in looga howl-galo hab qadiimi oo salka ku haya nidaam kala sarreeyn:
- Iminka waxaa loo baahan yahay hab-fikir cusub. Su'aasha aan is weydiinayaana waxay tahay: Siday middaa ku suurtagalaysaa haddii maalin walba la dhimo goobo dar-yeel caafimaad oo gaarsii-san inta u dhaxeeysa 170 - 320 magaalada Stockholm? Waa su'aasha ku meeraysanaysa maskaxda Eva Nowak.